‘भोट दियौँ, समृद्धि देऊ’- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ - कान्तिपुर समाचार
पुस १, २०७४ माधव सयपत्री
सैलुङ्ग काटेर सैलुङ्गकै फेदमा पुग्नुपर्छ रे । त्यहाँसम्मको दूरी, भूगोल र रुट थाहा नभएकाले हामी अलमलमा परेका छौँ । निर्वाचन कार्यालयको लोसे र अव्यवस्थित काम गराइले कर्मचारीहरूलाई निकै ‘दु:ख’ भएको छ ।
६ गते एघार बजे हाम्रो गाडी छुट्छ । ७ गते मतदानस्थलमा पुग्नु छ । चुचुरेका उमावि शिक्षक सिद्धिराज भट्ट मतदान अधिकृत छन् । एउटा टाटा सुमोमा ड्राइभरसहित एघार जना खाँदाखाँद गरी अटेका छौँ । टोकरपुरसम्म गाडीमा र त्यसपछि हिँडेर जाने हाम्रो योजना छ ।
खार्पानी मावि गोश्वाराको मतदानस्थलका दुइटा मतदान केन्द्रका कर्मचारीहरू दुइटै सुमोमा चढेका छन् । गाडी धूलो उडाउँदै हुइँकिरहेको छ । ‘तीस–पैँतीस जनाको हूल बेलुका जाडोमा कता बस्ने
होला π के खाने होला π’ मनमा अनेक तर्कना तँछाडमछाड गर्दै छन् ।
तिनोटा गाडी एकसाथ छुटे पनि अगाडिको गाडीले उडाएको धूलोले हाम्रो बाटै छेकिदिन्छ । गाडीहरूको दूरी फराकिँदै जान्छ । चार बजेतिर हामी गाल्पा पुग्छौँ । घाम पहेँलिएर पश्चिमी आकाशको गर्तमा भासिन लागेको छ । पाँच घण्टाअघिको मन्थलीको हपहपी गर्मी, अहिले मुटु कमाउने जाडो । हाम्रो भौगोलिक र प्राकृतिक विविधता । रामेछापको पश्चिमी भूभागको राम्रै ‘व्यापारिक हब’ बन्ने सम्भावना बोकेर उभिएको छ गाल्पा भञ्ज्याङ । प्राकृतिक वातावरण चिसो भए पनि चुनावी चहलपहलले मानिसहरू ताता र राता देखिएका छन् ।
प्रहरी जवान रमण थारू हराउँछन् । बजार पूरै खोजेपछि रमण भेटिन्छन् । सई महतारा भन्छन्, ‘नामै रमण । रमाइलो गर्न गाको होला नि रमण भाइ ।’ सुनेर रमण मन्द मुस्काराउँछन् ।
दोरम्बाबाट साँघुरो बाटोमा गाडी सुस्तसुस्त तल झर्न थाल्छ । दोरम्बा गाउँपालिकाको केन्द्र टोकरपुर पुगेपछि तीनवटा गाडी भेट हुन्छन् । साँझै पर्न लागेको छ । चिसो निकै बढेको छ । अगाडि जाने कि नजाने, दुविधामा छौँ । ‘निगुरेसम्म गाडी जान्छ ।’ एक स्थानीय भन्छन् । ड्राइभर बटारिन थाल्छन् । टोकरपुरसम्मको मात्रै कबुल छ । पैसा थपिदिने भएपछि कुरा मिल्छ । टोकरपुर सिँगार्चे गाउँ हुँदै गाडी उकालो लाग्छ । अलिकति मास्तिर पुगेपछि धूलोमा भासिएको भन्दै ब्याकलाइट बालेर गाडी उल्टो हिँड्न थाल्छ । ‘अगाडि’ को ‘गाडी’ ले बहाना बनाएजस्तो लाग्छ ।
गाउँमा साँझबत्ती बलिसकेको छ । गाडी फर्काइदिएर तीस जनाको डफ्फा उकालो चढ्न थाल्छौँ । त्यसपछि तेर्सिन्छौँ । तलबाट गाउँले कराउँछन्, ‘त्यता हैन । उकालो लाग्नुहोला ।’ धन्यवाद दिँदै हामी उकालो लाग्छौँ । कोही तलै छुटेका छन् । तलका साथीलाई बोलाउँछौँ, ‘ए, साथी π कता आइपुग्नुभयो ?’ तलबाट साथीहरू बोल्छन्, ‘हामी आउँदै छौँ है π’ बाटोमा कतै घर नभएकाले निगुरेतिर उकालिन्छौँ ।
निगुरे पुग्दा रातको आठ बजेको हुन्छ । जाडो खपिसक्नु छैन । हावा तेजसित बहेको छ । रगतै जम्लाजस्तो हुन्छ । डाँडाको ठूलो सिमेन्टेड घरमा पसल पनि रहेछ । हामी तातो पानीमा चाउचाउ र बिस्कुट हालेर खान थाल्छौँ । एक जना ‘भाते’ मास्टरले ‘भात नखाई सुत्दै नसुत्ने’ भनेपछि भात पकाउनैपर्ने हुन्छ । घरधनी भन्छिन्, ‘ठीक पारिदिन्छु, आपैँm पकाएर खानुस् ।’
गुन्द्रुक र भात तयार हुन्छ । खान्छौँ । जाडोमा घिच्नेभन्दा पनि थिच्नेको पीर । सहयोगी गाउँलेले हामीलाई बन्दै गरेको स्कुलमा लैजान्छन् । चार जना सुत्ने ठाउँमा हामी सात जना घुस्रिन्छौँ । ओढ्ने केही छैन । जिउका लुगा लगाएरै तेर्सो पर्छौँ ।
साथीहरूको बाघघुराइले सुत्नै दिँदैन । बाहिर निस्किसक्नु छैन । रिमरिममै उठ्छौँ । बाटो सोध्दै उकालो लाग्छौँ । ट्रयाक मात्रै खोलिएको भीरको सडक छ । मान्छे हिँड्नै मुस्किल हुने । तुसारो बाक्लिएर हिउँ बन्नै लागेको छ ।
डाँडामा घामले कलिला पाइला मात्रै टेकेको छ । घाममा बसिरहने समय छैन । टुङ्गोमा पुग्ने हतार छ हामीलाई । डाँडाबाट झर्छौँ । शीत र तुसारोले बाटो चिप्लो भएको छ । भनेको ठाउँमा खुट्टा टेकिँदैनन् । एक जना पुलिस भाइ लड्छन् । उनको भारी गुल्टिन्छ । बन्दुक उछिट्टिएर दस हात पर पुग्छ । धन्न π बन्दुक भरेको रैनछ ।
खोलामा पुग्न हामीलाई डेढ घण्टा लाग्छ । खोला तरेपछिको उकालोले तानाशर्माको ‘घनघस्या’ सम्झाउँछ । खोलापारिको स्कुलमा पुगेपछि साथीहरू भोक र थकाइले लम्पसार पर्छन् । मेरो हाल झन् बेहाल भएको छ ।
कसैले फोनमा सोध्छ, ‘कता आइपुग्नुभयो ?’ म भन्छु, ‘खै, कता कता ? ठाउँको नाउँ थाहा भए पो ।’ ऊ फेरि सोध्छ, ‘साल्मेको स्कुलमा हो ?’ भन्छु, ‘स्कुलचैँ स्कुलमै हो । साल्मे हो कि खाल्मे हो ?’ फोन गर्नेले माथि डाँडामा हेर्न भन्छ । दुई जना हात हल्लाउँदै छन् । फोनमै भन्छ, ‘उकालो आउनू ।
तेर्सो नजानू ।’
गोश्वाराको वल्लो मतदानस्थलका लागि दुई टोली खार्पानी मावितिर तेर्सिन्छन् । उकालिनेमा हाम्रो टोली मात्रै छ । मरीतरी डाँडामा पुग्छौँ । हामीलाई बोलाउने मान्छे गोश्वारा प्रहरी चौकीका पुलिस रहेछन् । भोकले लखतरान भएका छौँ । बाटोमा केही पाइएको हैन । प्रहरीचौकीमै भात खान्छौँ । मुढेबाट दोलखाको दूधपोखरी–ढुङ्गेको कच्ची बाटो हुँदै सरसामान ढुवानी हुँदोरहेछ त्यहाँ । चौकीका केही प्रहरी हाम्रै मतदान केन्द्रमा जाने तयारीमा रहेछन् ।
अघिअघि सर्लाहीका सिपाही बजरङ्गी साह छन् । पछिपछि म छु । उनको भारी निकै गहु्रँगो छ । लेकको बाटोमा तुसारो परेको छ । तराईका बजरङ्गीलाई उकालो हिँड्न निकै गाह्रो परेको छ । अप्ठेरो ठाउँमा उनी बन्दुकलाई लौरो बनाउँछन् । बजरङ्गीलाई म आफ्नै छोरो देख्छु । मन कटक्क काटिएर आउँछ ।
‘कति गाह्रो छ है पुलिसको जागिर खान ।’
खानापछि तीन घण्टाको धपेडीमा हामी मतदानस्थल पुग्छौँ । टोकरपुरबाट जम्मा दस घण्टा हिँडेछौँ हामी । एनसेलबाहेकको सिमले काम नगर्ने रहेछ । हाम्रा फोन काम लाग्दैनन् । स्कुलमै बासको व्यवस्था हुन्छ । म्यादी भाइबैनीहरू भात पकाउन थाल्छन् । खुला भेन्टिलेटरबाट फुइँफुइँती हावा पसेको छ कोठामा । भात थालमा हाल्नासाथ ‘पानी’ हुन्छ । पानी खाइसक्नै छैन । राति जस्ताबाट ओछ्यानमै शीत खस्न थाल्छ । बिहान मुख फुलेर हुमहुम्ती भएको हुन्छ । औषधिको नियमित डोजले भ्याएको छैन । रगत पत्ल्याउने औषधिसमेत बढी नै खाएको छु ।
दु:ख साथसाथै फरक अनुभूति पनि भएको छ । साथीहरू आआफ्नो काममा खटेका छन् । बैतडीका सिद्धिराज भट्ट, बाराका सई उत्तम श्रेष्ठ, दोलखाका हबल्दार रामजी थामी, कपिलवस्तुका सिपाही रमण थारू, नुवाकोटका ज्ञानबहादुर नेपाली, सर्लाहीका बजरङ्गी कुमार साह र बाँकी सबै रामेछापेली छौँ । पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण र मध्यनेपालका फरकफरक जातजातिका हामीले कहिले एकसाथ बस्न
पाउनु π म्यादी भाइबैनीको कञ्चन हाँसो र इतर्‍याईंले वातावरणलाई जीवन्त तुल्याएको छ ।
१० गते सात बजेभित्रै तयारी अवस्थामा बस्नु छ । मिर्मिरेमै हामी काममा खटेका छौँ । टेबुलघडीले तापक्रम ३८ डिग्री फरेनहाइट देखाएको छ । डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा झन् कस्तो होला π बिहानै रेडियोमा ‘शून्य डिग्री सेल्सियसमा मतदाता’ समाचार सुनिएको छ ।
भएभरका लुगा भिर्दा पनि मुटु काम्न छाडेको छैन । हात गँगरिएर कलम समातेको छैन । बोली लर्बरिएर कुरा पुग्दैन । मतपेटिका तयारीका झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्न लामै समय लाग्छ । आठ बजेतिर मात्रै फाट्टफुट्ट मतदाता देखिन थाल्छन् । मतदाताको एउटै आशय छ, ‘भोट दियौँ, अब
समृद्धि देऊ ।’
सर्वदलीय बैठकमा दलका कार्यकर्ताले ‘भोट हाल्न नजान्नेको भोट अरूले हाल्दिन पाउनुपर्ने’ अडान राखेका थिए । त्यै देखिन्छ त्यहाँ । एकचोटि ‘मेरा बा’ भन्छ । भोट हालेर जान्छ । अर्कोपटक ‘आमा’ भन्दै आउँछ । एक छिनपछि उही मानिस आउँछ र भन्छ, ‘मेरी फुपू । आँखा देख्नुहुन्न ।’ एउटै मानिस आमा, बा, दिदी, भिनाजु, काका, काकी, मामा, माइजू नाता लगाएर सर्साउँदा मान्छेको भोट हालेर जान्छ । अर्काको भोट हाल्ने कुकर्ममा कुनै पनि दल कम देखिँदैनन् । दलहरूको अघोषित मिलेमतै देखिएको छ ।
मुस्किलले बीस प्रतिशत महिलाले आफ्नो मताधिकार आपैँm प्रयोग गरे होलान् । बाँकी अरूकै हातबाट । आफ्नो हातै काटेर दिने महिलाले के गर्लान् खै π व्यक्ति सम्प्रभु हुने भनेकै मत हाल्दाको केही सेकेन्ड वा मिनेटमा मात्रै हो । त्यै भोट अर्कैलाई ठोक्न दिएपछि जनता कहाँ सार्वभौम हुन्छ ? मताधिकारको प्रयोग गर्नु र भोट बिग्रनु फरक विषय हुन् । भोट बिग्रे पनि उसले मताधिकार त प्रयोग गरेकै हुन्छ नि π यो उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्ने कुरै होइन ।
चुनाव सकिन्छ । फर्कने चिन्ताले सताउन थाल्छ । साँझ पर्दै गएको छ । चिसो चढ्दै गएको छ । मतपेटिका सुरक्षाकर्मीले जिम्मा लिएका छन् । खै, हाम्रो जिम्मा कसले लिन्छ हँ ? ‘खार्पानी केन्द्रबाट मतपेटिका लिएर एउटा ट्रक यतै आउने रे ।’ सुनेर मन अलि हलुको हुन्छ । निकै वरमा अर्को एउटा ट्रक पनि आइपुग्छ । पन्ध्र जना जति त्यसैमा चढ्छौँ । उताको केन्द्रका मतपेटिका, सुरक्षाकर्मी, एजेन्ट र कर्मचारी लिएर आठ बजे ट्रक आइपुग्छ । त्यसमा झन् बढी मानिस चढेका छन् । दुवै ट्रक निष्पट्ट अँध्यारोमा धर्खरिँदै ओरालो लाग्छन् ।
म ट्रकको बार समातेर उभिएको छु । सडक नाम मात्रको छ । ट्रकको हेडलाइटमा अगाडि हेर्दा बाँचिलाजस्तो लागेकै छैन । टेलिभिजनमा चाँडै फ्ल्यास न्युज बनिने भइयो π ‘लौ मरियोस् π संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो पनि बलिदानी होस् π’
दोलखाको सैलुङ्गेश्वरी गाउँपालिका–२ (साबिक दूधपोखरी गाविस) ढुङ्गे आइपुगेपछि झोलाबाट मोबाइल झिक्छु । दस बज्नै लागेको छ । नेटवर्कले थोरै काम गरेको रहेछ । पाँच दिनपछि मोबाइलले टावर भेट्टाएको छ । मोबाइल खुसी भयो कि म ? छोरालाई फोन गर्छु । ऊ पनि खुसी हुन्छ । नौ गते बेलुका टिपेको चार गाँस चारोबाहेक पेटमा पानी पनि परेको छैन । ठीकै छ, राम्रैका लागि उपवास बसिएको छ । संघीयता सफल होस् π
सैलुङ्ग सुरु भैसकेको छ । हात कठ्याङ्ग्रिएर ट्रकको बार पनि समात्न छाडेको छ । ट्रक उफ्रेको छ बुरुकबुरुक । हल्लिएको छ ज्यान । सेकेको छ जाडोले । यत्तिको आपत् जिन्दगीमा सायदै परेको थियो होला । कहाँ पुगियो π कता गइँदै छ π लेकका कोणधारी रूख मात्रै पल्याकपुलुक आँखामा नाच्छन् । कतै घना र कालो जङ्गल देखिन्छ ।
तीन घण्टाभन्दा बढी सैलुङ्गको जङ्गलमा कुदिसकियो । घरगोठ कतै देख्नु छैन । मैले दोरम्बामै ओर्लने योजना बनाएको छु । भन्छन् नि π ‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको ।’ दोरम्बा झर्नै बेस ।
ढुङ्गेबाट लगातार हुइँकिँदा दोरम्बा आइपुग्न चार घण्टै लाग्छ । म ओर्लिन्छु । ट्रक चौकीतिर लाग्छ । दोरम्बा आसपासका मतदान केन्द्रका मतपेटिका पनि त्यहीँ जम्मा पारिएका रहेछन् । ससानो जात्रै
छ मानिसको ।
ट्रकबाट ओर्लिएर बजारमा बास खोज्न थाल्छु । उता र यता लखरलखर गरिरहन्छु । घरमा कतै बत्ती बलेको छैन । ठूल्ठूला भोटेकुकुरको भुकाइले रातको सन्नाटा बिथोलेको छ । मेरो भने सातोपुत्लो उडेको छ । कुन बेला कुकुरले चोक्टा तान्ने हो, थाहा छैन । एकदमै विचलित र हतास भएको छु । घडी हेर्छु । एक बजेको छ । मोबाइलमा मात्रै हैन, मभित्रको चार्ज पनि रित्तिएको छ ।
परको एउटा घरमा बत्ती बलेको देखेपछि अनायासै ममा खुसीको सञ्चार हुन्छ । सुनसान सडकमा त्यतै लाग्छु । डराईडराई ढोका ढकढक्याउँछु । ‘को हो ?’ बूढो र धोद्रो स्वर बोल्छ । म बिन्ती बिसाउँछु, ‘चुनावबाट आएको । ढोका खोल्नुस् न हजुर ।’
ढोका छिट्टै खुल्छ । मलाई हेर्दै तामाङ बा बोल्छन्, ‘कदा बस्छस् त होइ तँ π सुत्ने ठाम छोइना ।’ म भन्छु, ‘यै टेबुलमा सुत्छु बा ।’ उनी भन्छन्, ‘जाडोमा कसरी सुत्छस् ? ओढ्ने छोइना । पर्तिर छोरा सुत्या छ । उतै सुत् ।’ उनले बताएअनुसारको घरमा जान्छु । बोलाउँछु । ठस्केर बोल्छ, ‘छैन सुत्ने ठाउँसाउँ ।’ ऊ ढोका खोल्दैन । निराश भएर बूढैतिर फर्कन्छु । पुस्तान्तरले कता पुर्‍याएछ हाम्रो ‘अतिथि देवो भव: !’
बूढा भन्छन्, ‘मसँग सुत्छस् ? यहीँ छेउमा सुत् ।’ यसो हेर्छु । मयलले सिरक कालो भएको छ । जिउका लुगा मैला छन् । भन्छु, ‘हुन्छ बा । तपाईंसँगै सुत्छु ।’ लगाएकै लुगामा बूढासँग घुस्रिन्छु । बूढाको जिउबाट अमिलो गन्ध आएको छ । सोध्छु, ‘बा, कति वर्षको हुनुभयो ?’ उनी भन्छन्, ‘सत्तरी र पाँच ।’
सातकै हुँदा बा छुट्नुभयो । बासँग सुत्न पाइनँ । सोच्छु, ‘मेरा बा बाँचेका भए पचहत्तरै पुगेको हुनुहुन्थ्यो ।’ सम्झन्छु, ‘मेरा बा अझै जिउँदै हुनुहुन्छ र म बासँगै सुतेको छु ।’
बिहानै उठेर बाटो लाग्छु । म भरे अवश्य घर पुग्छु । खै, चुनाव जित्नेले देशलाई अब कता
प्रकाशित : पुस १, २०७४ १६:०८
यो कथा आजै किन ?
पुस १, २०७४ ध्रुबचन्द्र गौतम
काठमाडौं — यो कथा म कहाँदेखि थालूँ, मेरो लेखनको कथा ? आजभन्दा ६५ वर्ष जति अघि त्रिजुद्ध हाई इङ्लिस स्कुल, वीरगन्जको सातौं कक्षाको एक कोठामा विद्यार्थीहरू चलिरहेका, हल्ला गरिरहेका थिए ।
आफूलाई नेपाली साहित्यमा ‘वीरगन्जको चिनो’ भन्ठान्ने लेखक ध्रुवचन्द्र गौतम हीरक जन्मोत्सव मनाइरहेका छन् । गौतमको ७५ वर्षे जिन्दगीको स्मृति उनकै शब्दमा :
यो कथा म कहाँदेखि थालूँ, मेरो लेखनको कथा ?
आजभन्दा ६५ वर्ष जति अघि त्रिजुद्ध हाई इङ्लिस स्कुल, वीरगन्जको सातौं कक्षाको एक कोठामा विद्यार्थीहरू चलिरहेका, हल्ला गरिरहेका थिए । पञ्जा लडाइरहेका थिए, सिनेमाको कहानी भनिरहेका थिए, कागजको हवाइजहाज बनाएर उडाइरहेका थिए । डुङ्गा र खाट बनाइरहेका थिए— कागजकै । क्लासमा मास्टर नआउन्जेल त्यस्तै हुन्थ्यो । त्यस बखत माडसाप क्लासमा आएका थिएनन्, उनले चलाउने बेत (लौरो) भने टेबल छेउमा अड्याएर राखिएको थियो ।
त्यसै बखत एउटा १० वर्ष जतिको छात्र भने खाकी कट्टु र डोरिया कमिज लगाएर क्लासभित्र टोलाएर बसिरहेको थियो । अरू बेला ऊ पनि गफमा मस्तसित हिस्सा लिने गथ्र्यो, त्यो मध्याह्न भने ऊ चुपचाप थियो ।
एकाएक त्यसलाई के सुझ्यो, आफ्नो स्कुलको हात्ती छाप ब्रान्डको कपी पल्टायो र लेख्न थाल्यो । होहल्ला बीचमा केही लेख्यो र, छेउको कुनै साथीलाई देखायो— ल हेर त, यो कस्तो छ ?
साथीले हेर्‍यो । त्यो केटाले कापीमालेखेको थियो :
सरस्वती तिम्रो शक्ति महान्
शुभ्र वसन छ हातमा वीणा
देऊ हामीलाई ज्ञान
सरस्वती तिम्रो शक्ति महान् !
साथीले सोध्यो, यो तैंले लेखेको कविता हो ?
केटाले भन्यो— अँ भर्खरै ।
साथीले अविश्वासको नजरले त हेर्‍यो, तर केही बोलेन । आदरणीय पाठकहरू, यो कथा त त्यत्तिकैमा टुङ्गियो । तर यहींदेखि मेरो कथा भने थालिन्छ, कलमी कथा । त्यो लेख्ने केटो मै थिएँ र, त्यही मेरो जीवनको पहिलो कविता हो ।
दोस्रो कविता मैले हिन्दीमा लेखेको थिएँ, मेरो गाउँ बेतौनामा । त्यस बखत पटनामा एउटा गोली काण्ड भएको थियो । त्यसमा एउटा छात्रको मृत्यु भएको थियो । त्यही अनाम, अपरिचित छात्रप्रतिको संवेदनामा कविता लेखेको थिएँ । पहिले मैले यसैलाई आफ्नो पहिलो कविता ठान्दथें, होइन रहेछ । त्यो दोस्रोचाहिँ कविता
अहिले मलाई अक्षरस आउँदैन । त्यसपछि धेरै हिन्दीमा र कहिलेकाहीं नेपालीमा मैले कविता लेख्न थालें ।
मेरो घरेलु वातावरण कविता वा कुनै पनि लेखनका लागि प्रेरणादायी थियो । पिताजी गोविन्दचन्द्रले कल्याण, स्वस्थानी ब्रतकथा आदि गीता प्रेस गोरखपुरबाट मगाइरहनुहुन्थ्यो । घरमा आमा दिपवतीदेवी पनि भागवत कुञ्ज, पञ्च गीत आदि पढ्नुहुन्थ्यो अर्थात् पाठ गर्नुहुन्थ्यो ।
हे कृष्ण शान्ति–रसको सरिता पहाड... अथवा
हे ऋषि, कलिमा कसरी तर्लान् सजिलो साधन आज्ञा होस् ।
त्यसकारण जब म एक क्लासमा भर्ना भएँ, गुरुको स्कुलमा, त्यस बखतसम्म मैले धेरै कथा पढिसकेको थिएँ । रामायण, महाभारत र स्वस्थानीका कैयौं कथा मलाई कण्ठ थिए ।
ती कण्ठ गरेका कुराहरूमा एउटा सरस्वती–स्तोत्र पनि थियो :
सरस्वती मया द्रष्टवा वीणा–पुस्तक धारिणी
हंसवाहन संयुक्त्वा विद्यादानम् करोतुमे ।
यो त्यसैबखत कण्ठ गरेको आजसम्म मलाई कण्ठै छ । यही एउटा स्तोत्र छ, जुन मलाई उबेलादेखि अझैसम्म आउँछ । विद्यार्थी हुनाले देवी सरस्वती हाम्रा लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थिइन् । यही कारणले होला, मैले आफ्नो पहिलो कविता लेख्दा ‘सरस्वती तिम्रो शक्ति महान्’ लेखें ।
त्यसपछि म कविता लगातार लेख्न थालें । घरबाट मात्र होइन, इष्टमित्र, वीरगन्जका अन्य कवि वा साहित्यप्रेमी बुर्जुगहरूबाट पनि प्रोत्साहन पाउन थालें । जस्तो— खेम पराजुली, मथुरामानसिं आदि । गोपाल (गोतामे) दाइले मलाई एउटा फाइल किनिदिनुभयो, कविताहरू राख्न । मेरो घरेलु वातावरण लेखनका लागि प्रेरणादायी थियो । केही परिस्थितिले पनि भावुकता र संवेदनशीलता मेरो स्वभावमा मनग्य घोलिदियो । पढ्ने प्रवृत्ति पनि थियो ।
त्यसकारण जब म गुरु केशवप्रसाद आचार्यको पाठशालामा एक क्लासमा भर्ना भएँ, मलाई रामायण, महाभारत र अन्य कतिपय कथा, स्तोत्र याद थिए । मलाई आफूले अक्षरारम्भ गरेको सम्झना छैन । ‘ठूलो वर्णमाला’ पढेको सम्झन्छु ।
कविता लगातार लेखे पनि, धेरै लेखे पनि, त्यस बखत म भने गायक बन्न चाहन्थें । सात क्लासमै, अंग्रेजीको परीक्षामा निबन्ध लेख्न भनिएको थियो— योर एम इन लाइफ । मैले आफू कवि होइन, गायक नै बन्न चाहेको भनेरलेखेको थिएँ ।
मेरो गायन त्यति खराब पनि थिएन । वीरगन्जका स्टेजहरूमा मैले धेरै गाएको छु । खासगरी सरस्वती पूजाको दिन हुने त्रिजुद्धका फङ्सनहरूमा । मेरा प्रशंसकहरू पनि थिए । २०१६ सालमा मैले आफ्नो पहिलो नेपाली गीत आफ्नै धुनसमेत हालेर गाएको थिएँ, जुन एकदम हिट भएको थियो वीरगन्जमा :
मनमा राखी तिमीलाई म तिम्रो पूजा गरूँला ।
त्यसपछि गीतको यस्तो सिलसिला पनि धेरै चल्यो । वीरगन्जमा म राम्रो चिनिने भएँ ।
२०१८ सालको सरस्वती–पूजामा मैले आफ्नो नाटक लेखें, ‘पिकनिक’ जसमा केवल केटीहरू पात्र थिए । ‘पिकनिक’ नाटक त दर्शक, प्रशंसक र अन्य सफलताले पनि अद्भुत बनेको थियो । साथीहरूको पनि सहयोग थियो पूरा । यसै नाटकमा मैले पहिलोपटक निर्देशन पनि गरें, यसमा सच्चाइको गुन्जायस छ । कारण, निर्देशक बलरामसिं मल्ल र मणिराम पौडेल पनि थिए । ‘पिकनिक’ नाटकलाई केही सम्झिनेहरू ‘नभूतो न भविष्यति’ भन्छन्, तर म भने ‘न भविष्यति’ मान्दिनँ ।
यसअघि २०१७ सालमा गोपाल गोतामेको नाटक ‘समस्या’मा चारमध्ये एक नायकका रूपमा मैंले काम गरें । ‘समस्या’का अन्य नायकमा बलरामसिं मल्ल र मणिराम पनि थिए । ‘समस्या’ एउटा अत्यन्त गम्भीर नाटक थियो र अत्यन्त स्तरीय पनि । त्यो मेरो प्रथम अभिनय थियो र अन्तिम पनि, त्यसकारण सम्झिन जरुरी भयो ।
त्रिजुद्ध र ठाकुरराम कलेजपछि मेरा लागि त्रिचन्द्र कलेज र त्रिवि, एमएका कक्षाहरू महत्त्वपूर्ण छन् । त्यतिखेर एमए, त्रिपुरेश्वरमै पढाइन्थ्यो । स्कुलदेखि विश्वविद्यालयको छात्र हुनु र पछि शिक्षक हुनु मेरा लागि चेतना र अनुभव वृद्धिका माध्यम भए । त्रिचन्द्र कलेजमा त म ती थोरै शिक्षकमध्ये पर्दछु, जो त्यहाँ विद्यार्थी र शिक्षक दुवै बने । यी अनुभवहरूको एउटा बेग्लै ग्रन्थ बन्न सक्छ, पछि कुनै बेला । शिक्षकका रूपमा म कस्तो थिएँ वा विद्यार्थीहरूसँग मेरो कस्तो सम्बन्ध थियो भन्न थालें भने अहिले कति जनाले नपत्याउन सक्छन्, यति भने भनिदिऊँ ।
त्रिचन्द्र कलेजमै पढ्दापढ्दै मेरो पहिलो नेपाली कविता २०२०, वैशाख १ गते छापिएको थियो । त्यही साल मेरो प्रथम कथाको प्रकाशन ‘रूप–रेखा’ मा भएको थियो । त्यसपछि क्रमश: मेरो नाउँ फाट्टफुट्ट केही समालोचक र पाठकले लिन थालेका थिए । कति स्थापित साहित्यकारसँग पनि परिचय भयो । कवि द्वारिका श्रेष्ठको घरमा त्यस बखतका प्रसिद्ध साहित्यकारहरूले मिलेर एउटा विद्रोहात्मक साहित्यिक संस्था खोल्दा, त्यसमा नयाँ लेखकका रूपमा मलाई पनि सामेल गरिएको थियो । त्यस संस्थाको पत्रिका थियो जसका सम्पादक थिए— पुरुषोत्तम बस्नेत र भुवन ढुंगाना । यस्तो संस्थागत अनुभव पनि मेरो पहिलो नै थियो । ‘अमलेख’ र ‘सिउँडी’ पत्रिका दुवै अहिले छैनन्, तर केही वर्षअघि द्वारिका र जलेश्वरी श्रेष्ठका घरमा हामीले ‘अमलेख’को रजत–जयन्ती मनाएका थियौं । ‘अमलेख’का सबैजसो त्यसमा सामेल भएका थिए ।
मेरा सारा साहित्यिक अभ्यास, चर्चा, पुरस्कार, सम्मान वीरगन्जदेखि नै थालिएका हुन् । त्यस समयको वीरगन्ज आजजस्तो विस्तृत थिएन । लगभग सब, सबलाई चिन्दथें । त्यसमाथि कविता–गीत–नाटकमा भाग लिनेलाई नचिन्नेको र प्रोत्साहन नदिने कि ? भनूँ भने म अझै पनि आफूलाई वीरगन्जकै लेखक ठान्दछु, जो काठमाडौंमा बसेर लेखिरहेको छ ।
२०२२ सालमा म त्रिविबाट एउटा भाषिक भ्रमणमा गएको थिएँ, जसका नेता थिए— मेरा गुरु बालकृष्ण पोखरेल, भाषाशास्त्री, साहित्यकार र आदरणीय व्यक्तित्व । त्यो यात्राको मेरो जीवनमा अलग साहित्यिक महत्त्व । त्यसै यात्रामा मैले एउटा उपन्यास–लेखनको थालनी गरें । म लेखिरहन्थें, बेलुकाबेलुका । काठमाडौं गएपछि एकदिन ‘रूप–रेखा’ का सम्पादक उत्तम कुँवरले भने—‘रूप–रेखा’ले आगामी वैशाखमा एउटा सिंगो उपन्यास छाप्ने योजना बनाएको छ, त्यसैसँग किताब पनि छापिन्छ, उपन्यासका रूपमा । तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ ?”
मलाई त के चाहियो ? लेखिरहेकै थिएँ, सक्छु भनिदिएँ । त्यस बखतसम्म मैले रत्न राज्यलक्ष्मी कलेजमा पढाउन थालिसकेको थिएँ । त्यसैबखत झापामा एउटा सातदिने साहित्यिक सेमिनार हुने भयो, केदारमान व्यथितको सक्रियतामा । त्यति ठूलो साहित्यिक सेमिनार मैले फेरि कहिल्यै देखिनँ । मलाई पहिलोपटक कथकारका रूपमा आमन्त्रित गरिएको थियो । जान मन त थियो तर लगभग १० दिनको छुट्टी चाहिन्थ्यो । भर्खर पढाउन थालेकोलाई कसले देला छुट्टी ? त्यो मैले सेमिनार समितिलाई बताइदिएँ, छुट्टी नमिले जान्नँ । उनीहरूले मलाई नयाँ भए पनि वा सके नयाँ लेखक भएकाले एउटा चिठी ‘रत्नराज्य कलेज’ लाई लेखिदिए, औपचारिक रूपमा । त्यसपछि छुट्टी मिल्यो । हामी रक्सौल हुँदै गएका थियौं । रक्सौलमा पुलिसले सोधपुछ त गर्‍यो तर सहृदयतापूर्वक नै जान दियो । पुलिसको हाकिम जाँच्नै मनिर पनि आयो । त्यसले हाँस्दै सोध्यो, ‘अच्छा, आप भी कवि है ? आप भीकविता सुनाएंगे ?’
मैले, ‘हाँ’ भनें । त्यसले जान पनि दियो । म भने सोच्न थालें, किन त्यस्तो सोध्यो ? मेरो अनुहार कविजस्तो भएन कि, कवि हुने लायक देखिएन ?
सेमिनारको उल्लेख यसकारण पनि जरुरी भयो कि त्यहाँ म फुर्सद पायो कि उपन्यास लेख्न बसिहाल्थें । फुर्सदको अर्थ, अरू नभएको बेला पारेर पनि हो । एक दिन जगदीश घिमिरेले देखिहाले । सोधे, ‘के लेख्नुभएको ?’
‘खास त्यस्तो होइन, फुर्सदको समय बिताएको ।’
तर जगदीश त्यतिले के मान्थे । अन्त्यमा उनी प्रथम व्यक्ति भए, जसलाई मैले भन्नुपर्‍यो, एउटा उपन्यास लेख्दै छु, ‘रूप–रेखा’ का लागि । यति त ‘रूप–रेखा’ सम्पादकलाई पनि थाहा थिएन । म हत्तपत्त भन्न चाहन्नँ पनि, पहिल्यैदेखि, अहिले पनि ।
जगदीशले शीर्षक पनि सोधेका थिए । तर शीर्षकमा मै स्पष्ट थिइनँ, त्यस बखत ।
काठमाडौं फर्केपछि उपन्यास सकेर पाण्डुलिपि ‘रूप–रेखा’ लाई बुझाइदिएँ । एक दिन २०२४, वैशाख १ गते, मेरो त्यो पहिलो उपन्यास प्रकाशित भयो । शीर्षक थियो, ‘अन्त्यपछि’ ।
मलाई उपन्यासकार बनाउने ‘अन्त्यपछि’ नै थियो भने यो मेरा लागि कति महत्त्वपूर्ण थियो, बुझ्न सकिन्छ । ‘अन्त्यपछि’को प्रकाशनपछि धेरै नकारात्मक र थोरै सकारात्मक टिप्पणी–चर्चाहरू धेरै आए ।
पत्रिकासँगै पुस्तकाकारमा पनि छाप्ने भनेर अतिरिक्त छपाइ पनि गरिएको थियो । पछि एक दिन बुझ्दा थाहा पाइयो, ‘नेपाल प्रेस’ बाट त्यो सिङ्गो बन्डल नै हरायो भनियो । त्यसले गर्दा, निकै पछि मात्र छापिन सक्यो, पुस्तकका रुपमा ।’
यी सारा समयभरिमा मित्र पनि धेरै भए, आलोचक पनि भए, शुभेच्छुक पनि भए, सबै चाहिन्छन् पनि । मित्र केही असल छन्, केही खराब छन्, केही बढी खराब छन्, सायद यस्तो पनि आवश्यकै होला जीवनमा भन्ठान्दछु । धेरै मित्र आंशिक छन् । केही मित्र समर्थक पनि छन् तर ती ‘प्यासिभ’ समर्थक छन् । शब्द यही स्वाभाविकता पनि हो हाम्रो सेरोफेरोमा । केही मित्र अवश्य यस्ता छन्, जो मित्र पनि छन् र वास्तविक रूपमा शुभेच्छुक पनि छन् । त्यतिले पुग्छ पनि ।
सम्मान–पुरस्कार पनि पाएकै छु । मदन पुरस्कार, साझा पुरस्कार, लूनकरणदास गंगादेवी चौधरी सम्मान, डायमण्ड शमशेर सम्मान आदि धेरै छन् । स्वर्ण–सूत्र सम्मान, आख्यान पुरुष सम्मान आदि पनि अविस्मरणीय छन् । तर यहाँ जुन एउटा तस्बिर दिइएको छ, त्यसको पनि खास महत्त्व छ । २०६० पुस २५ गते, गोपाल गिरीले वीरगन्जमा मेरो भव्य र अविस्मरणीय नागरिक अभिनन्दन गराएका थिए । त्यो अभिनन्दन वीरगन्ज उपमहानगरपालिका र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले गराएका थिए । त्यो विशाल नागरिक अभिनन्दनले मलाई अभिभूत गराएको थियो । त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन मेरो जीवनमा । पञ्चकन्याद्वारा माल्यार्पण, धूपदीप, आरती, वटुकहरूद्वारा वेद पाठ अनि नगरका सबै क्षेत्रका गन्यमान्यद्वारा एक–एक गर्दै मालासहितको अभिनन्दन, म अत्यन्त भावुक भएको थिएँ
आफ्नो नगरप्रति । त्यो समारोह नै वीरगन्जका मेयर गोपाल गिरीले आयोजना गरेको एकमात्र र अन्तिम भव्य समारोह पनि हुन गयो । त्यसपछि उनी एक अन्यन्त स्नेही र मिलनसार मित्र, सम्झनामा मात्र भेटिने भए । उनैले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, वीरगन्जका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश रुङटासहित यो ‘वीरगन्जको चिनो’ उपहारद्वारा अभिनन्दन गरेका थिए । यो तस्बिर यहाँ किन दिइयो भने म आफू पनि नेपाली साहित्यलाई ‘वीरगन्जको चिनो ठान्दछु ।
प्रिय पाठकहरू, सम्झना धेरै छन्, इच्छा हजार हुन्छन् । साहित्यकै इच्छा पनि सबै पूरा हुँदैनन्, जति लामो उमेर भए पनि । जति लामो उमेर बिते पनि । अन्त्यमा गालिबका यी प्रख्यात पंक्तिहरू यहाँ सटीक हुने देखेर उद्धृत गर्छु र थामिन्छु :
पुनश्च: ‘यो कथा आजै किन ?’ किनभने भोलिदेखि म ७५ औं वर्षमा प्रवेश गर्दै छु । त्यसैले विगत वर्षका सम्झनास्वरूप, आजै ।
प्रकाशित : पुस १, २०७४ १६:०७